RASMI: Liverpool oo ku dhawaaqday xiddigeedii ugu fiicnaa xili ciyaareedka 2018-2019 iyo goolkeedii ugu quruxda badnaa – Gool FM
RASMI: Liverpool oo ku dhawaaqday xiddigeedii ugu fiicnaa xili ciyaareedka 2018-2019 iyo goolkeedii ugu quruxda badnaa
(England) 27 Maajo 2019. Liverpool ayaa si rasmi ah u shaacisay in daafaceeda reer Holand ee Virgil van Dijk uu ku guuleytay laacibkii ugu fiicnaa kooxdeeda xili ciyaareedka 2018-2019, kaddib markii ay u codeeyeen taageerayaasha Reds.
Virgil van Dijk ayaa xili ciyaareedkan ku garaacay abaal marintan, laacibka reer Masar ee Maxamed Saalax.
Laacibka reer Holand ayaa xilli ciyaareed fiican ku qaatay kooxdiisa Liverpool Premier League, wuxuuna Reds ka caawiyay inay si adag kula dagaalanto Manchester City ku guuleysiga horyaalka.
Van Dijk ayaa 38 kulan uu ka ciyaaray horyaalka Premier League wuxuu dhaliyay 4 gool, waxaana laga dhaliyay 22, isagoo ku hogaamiyay kooxdiisa in shabaqeeda ay ilaashato 23 kulan.
Dhanka Europe wuxuu daafaca reer Holand kooxdiisa Liverpool ku hogaamiyay inay balan adag kaga sameystaan finalka Champions League dhigooda Tottenham Hotspur oo ay 1 bisha June ku wada ciyaari doonaan garoonka Wanda Metropolitano.
Dhinaca kale kooxda Reds waxa ay ku dhawaaqday goolkeedii ugu fiicnaa xilli ciyaareedkan, waxaana ku guuleystay weeraryahankeeda reer Masar ee Mohamed Salah, kaasoo ku qaatay goolkii cajiibka ahaa ee uu ka dhaliyey kooxdiisii hore ee Chelsea kulan dhacay 14 bishii April 2019.